Carwadda 127-aad ee Kanton waxaa lagu qaban doonaa khadka tooska ah laga bilaabo Juun 15 illaa 24. Carwadan online-ka ah waxay noqon doontaa naqshad dhismeed cusub iyo dib-u-habayn geeddi-socod ah. Waxay soo bandhigi doontaa seddex qaybood oo isdhaxgal ah: Qalabka Docking, Aagga ganacsiga ee xudduudaha iyo Adeegga Suuqgeynta Tooska ah, kaas oo isku dhafan doona wadajirka, gorgortanka iyo macaamil ganacsi, oo sii wadaya inuu ciyaaro faa'iidooyinka bandhig ganacsi. Iyada oo ku saleysan B2B oo aan tixgelineyno qaar ka mid ah aaladaha B2C, waxaan dhisi doonnaa 10 × 24 barxadda ganacsiga ajnebiga ah si loogu bixiyo bandhig intarneedka, wadajirka wax soo saarka iyo iibsiga, wada xaajoodka khadka tooska ah iyo adeegyada kale ee loogu talagalay soo bandhigayaasha iyo iibsadayaasha, oo ganacsatada Shiinaha iyo ajaanibta ahi amarro dhig oo ganacsi ku samee guriga.
1. Barxadda soo-gelinta muuqaalka ee internetka ayaa la dhisi doonaa, waxaan kor u qaadi doonnaa dhammaan shirkadaha bandhigyada 25000 ee ka qayb qaadanaya Carwada Canton inay ku soo bandhigaan khadka tooska ah, iyadoo la raacayo goobaha caanka ah ee muuqaalka asalka ah, loo kala qeybin doono bandhig dhoofinta iyo soo dejinta, iyo goobo bandhig u dhigma ayaa loo kala saari doonaa siday u kala horreeyaan, bandhigga dhoofinta waxaa loo qaybin doonaa 16 qaybood oo badeecooyin ah iyadoo loo eegayo qaybaha qalabka elektaroonigga ah, isticmaalka maalinlaha ah, dharka iyo dharka, iyo daryeelka caafimaadka iyo caafimaadka, waxaana la dejin doonaa 50 goobood oo carwo lagu soo bandhigi doono. siday u kala horreeyaan, waxaan hagaajin doonnaa nidaamka weydiinta waxaanna hagaajineynaa howlaha raadinta luqadaha badan, oo iibsadayaashu ay ku habboon yihiin inay helaan bandhigyo iyo bandhigyo.
2. Aagga ganacsiga e-commerce ee xudduudaha ka gudba ayaa la dejin doonaa, waxaan qaban doonnaa waxqabad hal ku dhiggiisu yahay "Isku-dubbaridka Canton Fair iyo Wadaagista Fursadaha Ganacsi ee Caalamiga ah". Iyadoo la dhisayo xiriiro isweydaarsi, waxaan ku fulin doonnaa hawlo ganacsi oo internetka ah waqti mideysan iyadoo la raacayo magaca iyo sawirka mideysan ee ay diyaarisay Canton Fair, inta badan oo ay ku jiraan laba qaybood: marka hore, waxaan sameyn doonnaa tijaabo e-commerce oo xudduud ah aagga, buunbuuniya shaqada aag kasta oo tijaabo ah oo dhammaystiran, isla markaana dhiirrigeliya tiro ka mid ah shirkadaha ganacsiga e-commerce brand-xuduudaha ah. Marka labaad, waxaan dooran doonaa tiro ka mid ah isgoysyada iskudhafka e-commerce si aan u muujino astaamaha "ganacsi ilaa shirkad" bandhig ganacsi. Inta badan waa iskaashi lala yeesho barnaamijka 'B2B platform' iyo qayb ka mid ah barxadda B2C iyada oo la tixgelinayo, laguna dhiirrigelinayo ururada madal inay ka qaybgalaan carwada dhammaan noocyada shirkadaha la kulmaya heerarka tayada, si loo ballaariyo tirada shirkadaha ka-faa'iideystayaasha ah.
3. Adeegyada suuqgeynta tooska ah ayaa la bixin doonaa, waxaan sameyn doonnaa qadka tooska ah ee khadka tooska ah iyo isku xirka, waxaanna u diyaarin doonaa qolka tooska ah ee khadka tooska ah 10 × 24 saacadood ee bandhig kasta. Qolkan tooska ah kuma koobna waqtiga iyo waqtiga. Bandhiguhu ma yeelan karo oo keliya wadahadal fool ka fool ah oo weji-ka-weji ah iibsadayaasha internetka, laakiin sidoo kale wuu xayaysiin karaa uguna dhiirrigelin karaa tiro badan oo wax iibsada iyada oo loo marayo baahinta tooska ah ee internetka isla waqtigaas. Barnaamijkeenu wuxuu kaloo bixin doonaa howlo ay ka mid yihiin fiidiyow dalbanaya, fiidiyoow lagu duubayo, wada-hadal is-dhexgal iyo wadaagid si loo kobciyo foomamka bandhigga.
Waqtiga boostada: Meey-20-2020